Part Of zeRoTraSh: တယ်လီဖုန်းမပြောတတ်သူများ
ဘလော့ဂ်တွေက ဖွင့်မရ ဖတ်မရဖြစ်တော့ ရေးချင်စိတ်က ကုန်ခမ်းပြီး ပစ်ထားသလုို ဖြစ်နေတာ ကြာပေါ့။ အလုပ်များတယ်လုို့လဲ အကြောင်းပြစရာမရှိပါဘူး ကုိုယ်က ဘန်ကီးမွန်းတုို့ အုိုဘားမားတုို့မှ မဟုတ်တာ။ ပျင်းတာလဲပါတယ် မရေးဘူးဆုိုတာက သိတဲ့အတုိုင်းပဲ အပျင်းကတစ် ဒီကော်နက်ရှင်နဲ့ကတော့ကွာ ဆုိုတာကလဲ ဖြစ်ဆုိုိတော့ ပုို့စ်မတင်တာတောင် ကြာပေါ့။ အခုတော့ တင်လုိုက်ပါတယ် (ဦးရှင်ကြီးမဟုတ်ပါ) ပုို့စ်။
ဒီပုို့စ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံး ပုံနှိပ်ဆောင်းပါးအဖြစ် ဖော်ပြခံရတဲ့ စာမူပါ။ သိပ်မကြာသေးဘူး ၃ လလောက်ပဲ ရှိဦးမယ် News Watch ဂျာနယ်ထဲပါလာတာ။ စာမူတော့ ပါတယ် ကလောင်နာမည်တော့ ပါမလာဘူး။ ဖြစ်ပုံက ဒီလုို စာမူရေးပြီး ပုို့လုိုက်တာ အီးမေးလ်နဲ့ သူငယ်ချင်းဆီကုို ဆုိုပါတော့။ သူငယ်ချင်း သွားပုို့လုိုက်တာ ဂျာနယ်ကုို။ ဂျာနယ်က ကောက်ခါငင်ခါကြီး ထည့်မယ်ဆုိုတော့ ရေးထားတဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် ဖုိုင်မှာ နာမည်တင်မကဘူး ရာထူးတွေ လိပ်စာတွေ အစုံပါလုို့ အဲဒါတွေ ဖြုတ်လုိုက် နာမည်တော့ ထည့်လုိုက်လုို့ ပြောလုိုက်တာ သူငယ်ချင်းကလဲ ဂျာနယ်တုိုက်ကုို အဲဒီ့အတုိုင်း ပြောပါသတဲ့။ သုို့သော် ဒီဘက်လမ်းထိပ်မှာက ဂျပုိုးလုို့ ပြောတာ ဟုိုဘက်ရောက်တော့ လိပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆုိုတဲ့ အတုိုင်းပဲ ဆောင်းပါးမှာ ဘာနာမည်မှကုို ပါမလာဘူး ပြတ်ကရောပဲ N.W လုို့ ထည့်လုိုက်သတဲ့။
စာမူပါလုို့ ဖတ်လုိုက်တော့ နာမည်ကပါမလာဘူး အီလည်လည်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ ခံစားရတယ်ပေါ့လေ သုို့ပေမယ့် ခံစားချက်က ၁ နာရီမကျော်ပါဘူး အေးလေ လူတွေဖတ်ဖြစ် အေးတာပဲဆုိုတာနဲ့ စိတ်ကျေနပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုိုယ်က ရစ်လေ့ရှိတော့ အယ်ဒီတာချုပ်ကုို ဖုန်းဆက်ပြီး ရစ်လုိုက်သေးတယ်။ ဘယ့်နှယ့်ဖြစ်ရတာတုန်းပေါ့ ဟုိုဘက်ကလဲ တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့ ဘာညာပေါ့ နားလည်မှုလွဲတာပါတဲ့ ရပါတယ်ပေါ့လေ တကယ်လဲ အဲဒီ့အတုိုင်း ဖြစ်ခဲ့တာကုိုး ထားပါတော့။ အခုတော့ ဘလော့ဂ်လေးမှာ ပုို့စ်လေး တင်မဟဲ့လုို့ စဉ်းစားတော့ အသစ်ရေးဖုို့ကလဲ ဦးနှောက်က အလုပ်မလုပ်လေတော့ ဒါလေးပဲ တင်ပေးလုိုက်တယ် မဖတ်ရသေးရင်တော့ အသစ်ပေါ့နော့ . . . :)
ဒီစာကုိုရေးဖုို့ အကြောင်းအရာတွေ အခုရက်ပုိုင်းအတွင်းမှာ စီကာစဉ်ကာ ဆက်တုိုက်ဆုိုသလုို ဖြစ်လာလုို့ ရေးလုိုက်ရတာပါ။ ကျွန်တော် ဒီရက်ပုိုင်းအတွင်းမှာ အလုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ရော ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ကိစ္စတွေ အတွက်ရော ကုမ္ဗဏီတွေ ဆုိုင်တွေကုို ဖုန်းဆက်ပြီး စုံစမ်းမှုတွေ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကုမ္ဗဏီတွေကုို ဆက်တာကတော့ သူတုို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အပုိုင်းတွေကုို သိချင်လုို့ ဖြစ်ပြီး တချို့ကုိုတော့ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေ သိချင်လုို့ ဆက်တာပါ။ အဲဒီ့မှာပဲ အခုဒီစာကုို ရေးဖုို့ အကြောင်းအရာ ခေါင်းထဲဝင်လာပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိုတော့ ကျွန်တော် ဖုန်းဆက်ပြီး မေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ မြန်မာနုိုင်ငံမှာတော့ လုပ်ငန်းကြီးတွေလုို့ ပြောလုို့ရတဲ့ ကုမ္ဗဏီတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတုို့ဆီက ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုပေးတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုရာမှာ အင်မတန် အားနည်းတယ်ဆုိုတာကုို ကျွန်တော် တွေ့လုိုက်ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စကုို ပြောချင်နေတာလဲ အတော်ကြာပါပြီ။ ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတော်တော်များများကုို ဆက်ဆံတုိုင်း ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုမှုအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာလဲ တော်တော်များပါပြီ အဲဒီ့တော့ ကျွန်တော့်လုိုပဲ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ လူတွေအားလုံးရဲ့ကုိုယ်စား ဒီစာကုိုရေးလုိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က လုပ်ငန်းသမားတွေဘက်ကလဲ အလေးဂရုပြု ပြင်ဆင်စေလုိုတဲ့ စေတနာပါပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်မှာ လူတွေဟာ သိလုိုတဲ့ Information တွေကုို ဖုန်းနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ကသော်လည်းကောင်း၊ Yellow Pages တွေ Directory တွေကသော်လည်းကောင်း ရှာဖွေပြီး စုံစမ်းကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဖုန်းနံပါတ်တွေရှာပြီး သိလုိုတာကုို သက်ဆုိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေကုို ဖုန်းဆက်မေးမြန်းလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့လုိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းတဲ့ အခါမှာ တစ်ဘက်က ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုသူရဲ့ ဖုန်းပြောဆုိုမှု မတတ်ရင် ဆက်ပြီးမေးတဲ့ သူအတွက် အင်မတန် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရပြီး ကုမ္ဗဏီ သုို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရဲ့ သိက္ခာကုိုလဲ ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဖုန်းလေးမှ ကောင်းအောင် မဖြေနုိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းပဲ၊ ဒီအလုပ်ကြီးလုပ်နေပြီး ဒီလုိုဆက်ဆံရေးနဲ့လား၊ ဖုန်းတောင် မပြောတတ်တဲ့သူကုို အလုပ်ခန့်ထားတာ အံ့ပါရဲ့ စသဖြင့် ငြီးငြူမိကြမှာ အမှန်ပါပဲ။
ဖုန်းလာလုို့ ဖုန်းကုိုကုိုင်ပြီး ဖြေမယ်ဆုိုရင် ဟယ်လုို ဆုိုတာနဲ့စရတာ လူတုိုင်းသိပြီးသားပါ။ ဟယ်လုိုဆုိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အများသုံးစကားလုံးဖြစ်နေပါပြီ တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးသုံးပါတယ် (တရုတ်၊ ကုိုရီးယားနှင့် ဂျပန်တွင် သူတုို့၏ဘာသာစကားဖြင့်သာ ဖုန်းဖြေဆုိုမှုများ ရှိပါသည်။ ဤကားစကားချပ်)။ အိမ်ကုိုဆက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် လက်ကုိုင်ဖုန်းကုိုဆက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွက် အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ ဟယ်လုိုဆုိုပြီးဖြေပြီးရင် ကိစ္စပြီးပါတယ် တာဝန်ကျေတယ်လုို့လဲ ယူဆနုိုင်ပါတယ်။ သုို့ပေမယ့် အစုိုးရရုံးတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေ၊ ဆုိုင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ အတွက်တော့ ဟယ်လုိုဆုိုတဲ့ စကားလုံးလေး သုံးရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ ဟယ်လုိုရဲ့ အနောက်မှာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်လုပ်ငန်းက လက်ခံစကားပြောနေတာပါဆုိုတာမျိုးကုို ပြောသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် “မင်္ဂလာပါ။ ……… ကုမ္ဗဏီကပါ။ ဘာများကူညီဆောင်ရွက်ပေးရပါမလဲ” သုို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်လုိုဆုိုရင်လဲ “Good Morning ……… Company, How may I help you” ဆုိုပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်သလေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလုိုက် ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိပါလိမ့်မယ်။ သက်ဆုိုင်ရာလုပ်ငန်းရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေ မန်နေဂျာတွေဟာ သူတုို့လုပ်ငန်းနဲ့ လုိုက်ဖက်ညီမယ့် နှုတ်ခွန်းဆက်သနည်းမျုိုးကုို ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုမယ့်သူတွေကုို သင်ကြား ပေးထားရပါမယ်။ အဲဒီ့လုိုနှုတ်ဆက်ဖြေကြားမှုမျိုးဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် ကုိုယ့်ကုမ္ဗဏီ ကုိုယ့်လုပ်ငန်းကုို ဆက်သွယ်လာတဲ့သူကုို ပထမဦးစွာ စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးလုိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟယ်လုိုလုို့ တုံးတိတိ ဖြေတာနဲ့ အထက်ကပေးထားတဲ့ ဥပမာထဲကလုို နှုတ်ဆက်ဖြေဆုိုမှုဟာ အင်မတန်ကွာခြားတယ်ဆုိုတာ သိသာပါတယ်။ ဖုန်းဆက်တဲ့သူဟာ အခုလုို နှုတ်ဆက်စကားကုို ကြားရတယ်ဆုိုရင် သူပြောချင်တဲ့ ကုမ္ဗဏီကုို ရောက်တယ် မရောက်ဘူးဆုိုတာ ဘာမှ မမေးခင်မှာပဲ သိခွင့်ရသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ကုမ္ဗဏီတွေ လုပ်ငန်းတွေက ရှေးဦးစွာပေးလုိုက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုို့ သိစိတ်ကဖြစ်ဖြစ် မသိစိတ်ကဖြစ်ဖြစ် မှတ်ယူသွားပါပြီ။ အဲဒီ့အတွက်လဲ ဖုန်းဆက်တဲ့သူဟာ သူဆက်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်မှားနေတယ်ဆုိုရင်တောင် ကျန်တာတွေ မေးစရာမလုိုပဲ ချက်ခြင်းသိလုိုက်ရတဲ့ အတွက် အချိန်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးသွားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဖြတ်ပြီးပြောချင်တာ တစ်ခုရှိပါသေးတယ် တချို့ကတော့ နှုတ်ခွန်းဆက်သမှု လုပ်ကြပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ဘာပြောသွားမှန်းမသိအောင် မြန်ဆန်လွန်းလှတာကုို ကြားရပါတယ်။ ဝန်ထမ်းဟာ နေ့စဉ်နှုတ်ဆက်စကားဆုိုနေရတဲ့ အတွက် သူပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားကတော့ သူ့အတွက် သိသာပေမယ့် ကြားရတဲ့သူက ဘာမှ နားမလည်လုိုက်ဘူးဆုိုရင် နှုတ်ဆက်တာမမည်တော့ပါဘူး စကားပြောရာမှာ ကြည်ကြည်လင်လင် ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ ပြေပြေပြစ်ပြစ်ဖြစ်ဖုို့လုိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ ကုိုယ်ပြောတာဘာလဲဆုိုတာ တစ်ဘက်သားက နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာဝန်ထမ်းတွေ သတိထားရမယ့် အချက်ပါပဲ။ နောက်ပြီးလူတွေဟာ စကားပြောရင် expression အနိမ့်အမြင့်ရှိပါတယ် အဲဒီ့တော့ နှုတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ ဝတ်ကျေတန်းကျေ ပြောတာနဲ့ စိတ်ပါလက်ပါပြောတာ အင်မတန် ခွဲခြားသိဖုို့လွယ်ကူပါတယ်။
ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုမှုမှာ အထက်ပါအကြောင်းအရာများနဲ့ ကုိုက်ညီပေမယ့် နောက်ထပ် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါက ကုိုယ်ဆက်လုိုက်တဲ့ ကုမ္ဗဏီကလဲ မှန်နေပြီ ခုနကလုိုလဲ နှုတ်ဆက်စကားကြားရပြီးပြီဆုိုရင် ဖုန်းဆက်တဲ့သူက သူပြောချင်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ်သူသိချင်တဲ့ အချက်ကုို စပြီးမေးမှာပါ အဲဒီ့အခါမှာ များသောအားဖြင့် ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုပေးတဲ့ Receptionist တွေဟာ သက်ဆုိုင်ရာ ဌာန သုို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ် သုို့မဟုတ် ၄င်းတုို့ကုိုယ်တုိုင် ဖြေကြားခြင်းစတဲ့ အချက်တွေကုို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။ ဖုန်းဆက်လာတဲ့သူရဲ့ တောင်းဆုိုမှုအရ သက်ဆုိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ် သုို့မဟုတ် ဌာနကုို လွှဲပြောင်းပေးရာမှာ ခဏလောက်စောင့်ပါရှင်/ဗျာ သုို့ Hold On Please ဆုိုပြီး အသိပေးပြောကြားထားရပါမယ်။ အခုတော့ တချို့တွေဟာ ပြောချင်တဲ့သူရဲ့ နာမည်ပဲ ပြောရသေးတယ် ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ချက်ခြင်းလွှဲဖုို့ ကြိုးစားတာကုို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆက်တဲ့သူဘက်က ဘာမှန်းမသိပဲ ဖုန်းကုိုင်ထားရသလုို ဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ ကုမ္ဗဏီတွေတော်တော်များများမှာ တွေ့မြင်နေရတဲ့ အားနည်းချက်ပါပဲ။ ဒါဟာ တနည်းအားဖြင့် ဖုန်းဆက်လာတဲ့သူကုို စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးလုိုက်တာပါပဲ။ တချို့ဆုိုရင် သိချင်တာတစ်ခု ရှိလုို့ဆက်တာပါ ဥပမာ ဈေးနှုန်းသိချင်တာမျိုး၊ ကုန်ပစ္စည်းရှိမရှိ သိချင်တာမျိုးအတွက် ဖုန်းဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကုိုင်တဲ့ Receptionist တွေဟာ သူတုို့မသိလုို့ သိတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် သိတဲ့ ဌာနကုို ဖုန်းလွှဲပြောင်းပေးရာမှာ ခဏလောက်ကုိုင်ထားပါ ဘယ်ကုိုလွှဲပေးပါ့မယ်ဆုိုတာမျုိုး မပြောပဲ ဖုန်းကုို လွှဲပေးဖုို့ လုပ်ကြတာကုို ကြုံရပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ဖုန်းဆက်တဲ့သူက ဘယ်သူနဲ့ ပြောရမယ်မှန်းလဲမသိ ဘာမှန်းလဲ မသိပဲ ဖုန်းကြီးကုိုင်ပြီး စောင့်နေရပြီဆုိုကထဲက မဟုတ်တော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက ဖုန်းဆက်လာတဲ့သူ စုံစမ်းတဲ့ သူဟာ ကုိုယ့်ရုံးမှာ မရှိဘူး အပြင်သွားတယ်ဆုိုရင် အဲဒီ့လူရဲ့ကုိုယ်စား ဘာများမှာကြားချင်ပါသလဲ ဘာများမှတ်သားပေးထားရပါမလဲ ဆုိုတာမျိုးကုို မေးမြန်းထားသင့်ပါတယ်။ အဲဒီ့လုိုဆုိုရင် တစ်ဘက်လူအတွက်လဲ ကုိုယ်ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကုို ချန်ထားခဲ့လုို့ရသလုို အဆက်ခံရတဲ့သူ အပြင်ကပြန်ရောက်လာရင်လဲ ကုိုယ့်ဆီဘယ်သူ ဆက်သွားတယ်ဆုိုတာမျုိုးကုို သိရတဲ့အတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီ့လုို မေးတဲ့အတွက်ကြောင့် တကယ်လုို့များ ဆက်သွယ်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာ အခြားတစ်ယောက်က ကုိုယ်စား ဖြေရှင်းပေးနုိုင် ပြောနုိုင်မယ်ဆုိုရင်လဲ အလွယ်တကူ စီစဉ်ပေးနုိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းဆက်လာတဲ့သူကုို သေချာမေးမြန်းခြင်းဟာ အကျိုးမယုတ်တဲ့အပြင် ကုမ္ဗဏီအတွက် လုပ်ငန်းအတွက်ပါ အထောက်အကူ ဖြစ်စေနုိုင်ပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီ့လုိုမဟုတ်ပဲ ဖုန်းပြောမတတ်တဲ့အတွက် ကုိုယ့်ဆီကုိုဆက်သွယ်လာတဲ့ ဖောက်သည်တွေကုို အနုနည်းနဲ့ သတ်ပစ်လုိုက်တယ်ဆုိုတာ ဝန်ထမ်းတော်တော်များများ သတိမထားမိကြသလုို လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများနဲ့ မန်နေဂျာတော်တော်များများကလဲ သတိမပြုမိကြပါဘူး။ Reception က ဖုန်းဖြေပေးနေတာပဲ ဆုိုတဲ့ အသိနဲ့တင် နေနေကြတာ အံ့သြစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် မန်နေဂျာတွေ လုပ်ငန်းပုိုင်ရှင်တွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဖုန်းလက်ခံ ဖြေဆုိုပေးမယ့် ဝန်ထမ်းကုို သေချာစိစစ်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ထုိုနည်းအတူ ကျန်တဲ့ ရုံးသူရုံးသားများကုိုလဲ ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားမှုကုို အခြေအားဖြင့် သင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်။ တချို့ကုမ္ဗဏီတွေ လုပ်ငန်းတွေမှာ Receptionist သီးသန့်မရှိပဲ ကြုံရာလူက ဖြေကြားပေးတာကုို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာလဲ ကုမ္ဗဏီရဲ့လုိုအပ်ချက်အရသာ Receptionist ကုိုခန့်တဲ့အတွက်ကြောင့် လက်ခံနုိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားမယ့်သူ အားလုံးကုိုတော့ ဘယ်လုို ဖြေကြားရမယ်ဆုိုတာ သင်ထားသင့်ပါတယ်။ Receptionist ခန့်ထားတဲ့ ကုမ္ဗဏီတွေ လုပ်ငန်းတွေကလဲ ကုိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းကုို ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုမှုဟာ ဘယ်လောက် အရေးပါတယ်ဆုိုတာ ရှင်းပြပြောဆုိုထားရမှာပါ။ ဖုန်းလက်ခံတဲ့သူဟာ ကုမ္ဗဏီတစ်ခုလုံးကုို ကုိုယ်စားပြုတယ်ဆုိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ မမြင်ရသေးတဲ့ ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကုို သိမ်းသွင်းဖုို့ ဖုန်းလက်ခံစကားပြောတဲ့ အဆင့်ဟာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးသလဲ ဆုိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းလေးဖြေပေးရင် ဖြစ်နေတာပဲဆုိုတဲ့ ဝန်ထမ်းရဲ့ စိတ်ထဲက အစွဲကုို ဖျောက်ဖျက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုပေးတဲ့ ဝန်ထမ်းဟာ သူ့ရဲ့တာဝန်ဟာ ဘယ်လောက်တောင် အရေးပါသလဲ ဘယ်လောင်တောင် တာဝန်ကြီးသလဲဆုိုတာ သူသိအောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပါမယ်။ သူဟာ ဟယ်လုိုဆုိုတဲ့ စကားကနေစပြီး ကုမ္ဗဏီတစ်ခုလုံးကုို ကုိုယ်စားပြုပေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆုိုတာ သူသိအောင် ပြောထားရပါမယ်။ သူ့ရဲ့ ဖုန်းလက်ခံ ဖြေဆုိုမှု တစ်ခုဟာ မှားယွင်းခဲ့ရင် ထိခုိုက်မှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆုိုတာ သိအောင်ပြောထားသင့် သလုို ဖြေဆုိုမှု တစ်ခုဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့် အကျုိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆုိုတာလဲ ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကုို လုပ်ငန်းသမားတွေ မေ့နေကြတယ်လုို့ မြင်မိပါတယ်။ ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုတဲ့ Receptionist တွေကလဲ ဒါကုို သတိထားမိပုံ မရပါဘူး။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ပြောရရင် ဖုန်းလက်ခံဖြေဆုိုပေးတဲ့ ဝန်ထမ်းကုို သေချာစိစစ်ရွေးချယ် စေချင်ပါတယ်။ ရွေးပြီးရင်လဲ ကောင်းစွာသင်ကြားပြသထားရပါမယ်။ သူဟာ ကုမ္ဗဏီရဲ့မမြင်ရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အပြင် ဖောက်သည်တွေကုို စိတ်ကျေနပ်မှု စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်မှု ပေးနုိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လုို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူ့စကားတစ်ခွန်းဟာ ဖောက်သည်တစ်ယောက်အတွက် ခါးသီးမှု ဖြစ်စေနုိုင်သလုို ချိုမြိန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုလဲ ဖြစ်သွားနုိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းလက်ခံပြောတဲ့ ဝန်ထမ်းရဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် ကုိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေ၊ လုပ်ငန်းရဲ့ သိက္ခာ မြင့်တက်ခြင်း နိမ့်ကြခြင်းရှိတယ်ဆုိုတာ မန်နေဂျာတွေ လုပ်ငန်းရှင်တွေ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရည်အသွေး တုိုးတက်လာစေချင်သလုို လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပုိုင်းတွေလဲ အဆင့်မြင့်လာစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီစာကုို ရေးသားလုိုက်ရတာပါ။ အားလုံးပဲ ဆင်ခြင်သုံးသပ်နုိုင်ကြမယ်ဆုိုရင်ဖြင့် ရေးရကျိုးနပ်ပြီလုို့ ထင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ တယ်လီဖုန်းပြောတတ်ကြပါစေ . . .
Posted by zeRoTraSh at 5:47 PM
ဟဲလို..ဟုတ်ကဲ့..ဘလော့စပေါ့ ဒေါ့ကွန်း ကပါ..
သြော.. အဲဒါ ကျမ တို့ ပြောလို့မရပါဘူး..
အပြင်သွားပါတယ်..။ အခု မရှိပါဘူး..